Frost & I-Sullivan Technology Innovation of the Year - Hielscher Ultrasound Technology
Kuyinto ukuqashelwa Hielscher Ultrasonics innovative application of ultrasonics ubuchwepheshe kuya biodiesel yokukhiqiza ukuthi Frost & USullivan uyajabula ukuvuma umsebenzi wenkampani nge-Awards ehloniphekile ye-Technology Innovation yonyaka.
“It (Hielscher Ultrasonics) ngokukhethekile ekuthuthukiseni ultrasonics ethuthukile for industrial industrial processing izicelo kanye laboratory ukusetshenziswa. Njengoba ubuchwepheshe bayo obuningi emkhakheni we-ultrasonics, le nkampani iye yasungula izinto eziningi ezizosetshenziselwa ukukhiqizwa kwe-biodiesel. I-Hielscher ithuthukise izinhlobo ezihlukahlukene zokusebenza kwe-transducers e-ultrasonic eyenzelwe ukuthi ibuyiswe kabusha ku-line process.
Izindleko zokucubungula nge-ultrasonic ziphumela ekutshalweni kwemishini yama-ultrasonic, izindleko kagesi nokugcinwa. Kodwa ngisho nalokhu kungabangela ukukhiqiza umqondo kubakhiqizi ngoba lolo buchwepheshe bungakhuphula kakhulu amandla okukhiqizwa kwesitshalo esivele sikhona, ngaphezu kokunciphisa izindleko ezengeziwe ze-ultrasonics. Ukuhlolwa okujulile kubonise ukuthi izinga lithuthukisa futhi lincane izinto zokusetshenziswa ezidingekayo kudingeke ngokusebenzisa imishini enjalo. Lokhu kuzohumusha ibe nomthelela omuhle ngokuqondile emgqeni ophansi wabakhiqizi be-biodiesel.”
Sicela uchofoze lapha ukuze uthole umbhalo ogcwele ngu-Frost & Sullivan.
“Ukhula olusanda kwenziwa ekusetshenzisweni kwama-biofuel lukhulise ucwaningo olunzulu ezindleleni zokukhiqiza. Le nkinga igcwele kakhulu ekwakhiweni kwe-biodiesel, into eseyinqubo ye-batch ikakhulukazi. I-Biodiesel yenziwe ngenqubo ebizwa ngokuthi yi-transesteration. Kule nqubo, amafutha emifino noma yezilwane ahlangana notshwala phambi kwesisekelo. Ngokwesimo sayo sokuqala, ukusabela kuyinqubo ye-batch, ezothatha cishe amahora ayisishiyagalombili kuya kwayi-10 ukukhiqiza i-glycerol ne-biodiesel.
Nge-spurt ekufuneni kwe-biofuels, izinkampani eziningana zizama ukucubungula inqubo. I-Cavitation iyindlela eyodwa ehlolwayo futhi ingavezwa ngezinqubo eziningana ezibandakanya izibhamu eziphezulu eziphezulu nokucindezela komshini. I-Ultrasonics ngemishini ehlinzekwa yi-Hielscher nakuba ihlala ingenye yezinketho ezisebenzayo zokunakekelwa kwe-cavitation futhi ibonise imiphumela ekhuthazayo ekunciphiseni isikhathi senqubo ngaphandle kokuthinta ikhwalithi.” kusho uSivam Sabesan, Umhlaziyi Wezimboni eFrost & Sullivan
Mayelana nezenzo ezinhle kakhulu
Frost & Imiklomelo ye-Sullivan Best Imiklomelo ibona izinkampani ezihlukahlukene ezimakethe zesifunda kanye nezomhlaba ekuboniseni ukuphumelela okuvelele nokusebenza okuphakeme ezindaweni ezifana nobuholi, innovation kwezobuchwepheshe, isevisi yamakhasimende, kanye nokuthuthukiswa komkhiqizo. Abahlaziyi bezezimboni baqhathanisa abahlanganyeli bemakethe futhi balinganise ukusebenza ngokusebenzisa izingxoxo ezijulile, ukuhlaziywa, nokucwaninga okubanzi okwenziwe ukuze kutholakale imikhuba emihle embonini.
Frost & Umklomelo we-Sullivan's Technology Innovation unikezwa inkampani (noma umuntu ngamunye) owenzile ucwaningo olusha, oluye lwaholela emisha (s) enayo noma kulindeleke ukuthi ifake iminikelo ebalulekile embonini ngokuvumelana nokwamukelwa, ukuguqulwa, nokuhlelwa kokuncintisana . Lo mklomelo ubona izinga nokujula kohlelo lokucwaninga nokuthuthukiswa kwenkampani kanye nombono nokuthatha ingozi okwenza ukuba kwenziwe kanjalo.
Ukuze ukhethe umamukeli wemklomelo, uFrost & Ithimba le-analyst likaSullivan lilandelela emisha emakethe ye-tech-tech. Inqubo yokukhetha ihlanganisa izingxoxo ezibalulekile zabahlanganyeli kanye nokucwaninga okukhulu okuyisisekelo nesekondari ngokusebenzisa indlela ephansi. Ithimba labahlaziyili lihlunga abaqashi ngesisekelo sezinga lezilinganiso ezilinganayo nezilinganiselwe. Abahlaziyi futhi bacabangela ukuhamba kocwaningo kanye nobuchwepheshe emisha, nokubaluleka noma okubalulekile kwezinto ezintsha embonini jikelele. Umklomelo wokugcina umklomelo ukhethwa ngemuva kokuhlola okuphelele kwalolu cwaningo.
Ngaphandle kwendlela echazwe ngenhla, kunezinqubo eziqondile ezisetshenziselwa ukucacisa izikhundla zokugcina. Umamukeli walo mklomelo ususelwe kuncike kokukodwa noma ngaphezulu kwalokhu okulandelayo:
Ukubaluleka kwemibono emisha embonini, nakwezinye izimboni (uma kusebenza)
Kungenzeka kwemikhiqizo emisha (s) ukuba ibe yizinga elijwayelekile lemikhiqizo (s)
Inhlanhla yokuncintisana kwezinto ezintsha ngokuya kwezinye izinto ezintsha ezihlobene
Impembelelo (noma ingathonya elingaba khona) emisha (ama) emisha embonini yenkampani noma embonini yengqondo kanye / noma umugqa ophansi wenkampani
Isisindo sempahla yengqondo ehlobene nemisha emisha, okungukuthi, amalungelo obunikazi, izincwadi zesayensi, amaphepha ezincwadini ezibuyekezwa ngontanga.
Ukusetshenziswa kwama-Ultrasonic Reactors eNcane Yokuqhubekayo ye-Biodiesel Process - Graham Towerton (2007)
Indlela 'Yokukhohlisa' Yokwenza Biodiesel